Ny olom-pirenena amerikana rehetra dia nasaina nivoaka avy hatrany tany Afghanistan
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Ny olom-pirenena amerikana rehetra dia nasaina nivoaka avy hatrany tany Afghanistan
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Masoivohon'i Etazonia ao Kabul, Afghanistan
Ny masoivoho amerikana dia nangataka ny olom-pirenena amerikana mba hiala ao Afghanistan avy hatrany amin'ny alàlan'ny safidy sidina misy.
Raha tsy misy ny fanohanan'i Etazonia, dia maty vetivety ny tafika Afghanistan manoloana ny fandrahonana Taliban.
Ny masoivoho amerikana ao Kabul dia nitatitra fa ny miaramila Afgana nitolo-batana dia novonoin'ny Taliban.
Nanambara mialoha ny tompon'andraikitra amerikana fa hifehy an'i Kabul ny Taliban ao anatin'ny herinandro maromaro ka hatramin'ny enim-bolana.
Ny masoivoho amerikana dia namoaka fanairana momba ny fiarovana fotoana fohy taorian'ny nilazan'ny Taliban fa nisambotra an'i Kandahar, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Afghanistan
Masoivohon'i Etazonia tao Kabul dia nanentana ny olom-pirenena amerikana rehetra hiala ao Afghanistan avy hatrany, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny safidy sidina ara-barotra rehetra misy, manolotra vola indramina amin'ny Amerikanina tsy afaka mividy tapakilan'ny fiaramanidina raha ilaina izany.
"The Masoivohon'i Etazonia manentana ny olom-pirenena amerikana handao an'i Afghanistan avy hatrany amin'ny alàlan'ny safidy sidina ara-barotra azo atao ”, hoy ny famakiana fampandrenesana avy amin'ny masoivoho tamin'ny alakamisy.
Nanolotra fanampiana miaraka amin'ny visa mpifindra monina ho an'ny mpianakavy vahiny ny masoivoho.
Nandeha ny fampandrenesana taorinan'ny nanambaran'ny Taliban fa nosamboriny i Kandahar, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Afghanistan. Talohan'izay dia nilaza ny fandresena tao an-tanànan'i Ghazni, 150km (95 miles) miala ny renivohitra izy ireo. Ghazni no renivohi-paritany faha-10 ao Afgana nianjera tamin'ny Taliban hatramin'ny nialan'i Etazonia tamin'ny Afghanistan tamin'ny Mey.
Vinavinaina ho vita amin'ny faran'ny volana aogositra ny famaranana, ary nambaran'ny tompon'andraikitra misahana ny faharanitan-tsaina fa hifehy ny renivohitra ny Taliban ao anatin'ny herinandro maromaro ka hatramin'ny enim-bolana manaraka.
Miaramila amerikana an-jatony no mijanona ao Kabul, ao amin'ny ambasady sy amin'ny seranam-piaramanidina. Na izany aza, ny mpiasan'ny masoivoho izay afaka manao ny asany lavitra dia efa nomena hevitra tamin'ny volana aprily mba hiala, miaraka amin'ny Departemantam-panjakana mitanisa ny “fitomboan'ny tatitra momba ny herisetra sy fandrahonana.”
Raha tsy misy ny fanohanan'i Etazonia, dia maty vetivety ny tafika Afghanistan manoloana ny fandrahonana Taliban. Ny miaramila napetraka teo akaikin'ny sisin-tanin'ny firenena dia noroahina namakivaky ny sisintanin'i Afghanistan ary niditra tany amin'ireo firenena mifanila aminy, ary ny alakamisy teo dia nitatitra ny masoivoho amerikana ao Kabul fa novonoina ireo miaramila Afghanistan ary ny mpitarika ny tafika sy sivily dia notazomin'ny hery Taliban tsy ara-dalàna.
Nofaritan'ny masoivoho fa “manelingelina be” ny fanenjehana, ary nilaza izy ireo fa “mety hamorona heloka bevava an'ady.”
Na dia efa mandeha aza ny dinika fandriam-pahalemana ataon'i Etazonia any Qatar, dia nilaza ny mpitondra tenin'ny filoham-pirenena Ashraf Ghani ny alatsinainy teo fa ny “fiezahana haka fahefana amin'ny herin'ny hery” ihany ny vondrona, raha nilaza kosa ny mpitondra tenin'ny Taliban, Zabihullah Mujahid, ny Alarobia fa " Tsy nilefitra tamin'ny tetika faneriterena avy any ivelany akory izahay ary tsy mikasa ny hiatrika an'io fotoana io koa atsy ho atsy. ”